Dhorkaan Waajjirri Gumrukaa Buufata Xayyaaraa Finfinnee meeshaalee gara biyyaa seenan irra kaa’e maali? – ኢትዮጵያ ቼክ
Dhorkaan Waajjirri Gumrukaa Buufata Xayyaaraa Finfinnee meeshaalee gara biyyaa seenan irra kaa’e maali?
Guyyoota darbanitti xalayaan hojiirra oolmaan qajeelfama meeshaalee faayidaa dhuunfaaf oolanii lakk. 51/2010 dhaabbachuu himu miidiyaalee hawaasummaarratti naanna’aa tureera.
Haaluma walfakkaatuun beeksisni meeshaa kamiyyuu (uffatafi kophee dabalatee) gara biyyaa galchuun dhorkaa akka ta’e daldaltoota gara biyya alaa deddeebi’uun meeshaalee fidan akeekkachiisus miidiyaalee hawaasummaarratti naanna’aa tureera.
Hordoftootni Itoophiyaa Cheek hedduunis dhugummaa odeeffannoowwan lamaan kunneenii akka isinif mirkaneessinu nugaafataa kan turan yemmuu ta’u nutis dhimmicharratti Waajjirra Gumrukaa Buufata Xayyaaraa Finfinneetti hojjetaa garee Barnoota Maamiltootaa kan ta’an Obbo Mitikkuu Ababaaw haasofsiisnee jira.
Isaanis xalayaawwan lamaan sirrii ta’uufi waajjira isaaniitin beekkamtii kan qaban ta’uu Itoophiyaa Cheekitti himaniiru.
Sababni dhorkaa amma kaa’ame kanaas namootni carraa qajeelfamni lakk. 51/2010 kenneefitti fayyadamuun meeshaalee qaraxa malee biyya alaatii galchan daldalaaf oolchuun daldaltoota karaa seera qabeessa ta’een hojjetan irratti dhiibbaa uumuu isaanii akka ta’e Obbo Mitikkuun himu.
“Maamilli tokko yeroo hunda (gara biyya alaatti) kan deddeebi’u yoo ta’e, qaraxa malee meeshaalee kan fidu yoo ta’e daldaltoota karaa seera qabeessaan meeshaalee galchanfi gibira kaffalan kasaaraa keessa kan galchu waan ta’eef fi dhiibbaa kan uumu ta’uu isaatiin dhorkaan kun kaa’ameera” jedhan.
Hojiirra oolmaa qajeelfama meeshaalee faayidaa dhuunfaaf oolanii lakk. 51/2010 hordofee keessattuu uffatnifi kopheen baay’inaan gara biyyaa seenuu akka eegale kan himan Obbo Mitikkuun, daldaltootni seera qabeessaas komiifi mormii isaanii dhiyeeffachaa turuu himan.
“Heeyyama daldalaa kan qabullee heeyyamasaa deebisuun hanga mala sanaan meeshaalee galchuutti gaheera. Sababnisaas mana kireeffatee, qaraxa kaffalee, gibira kaffalee bu’aa hin argatu. Kanaaf heeyyama daldalaasaa deebisee akka imalaatti qaraxa malee meeshaalee gara biyyaa galchuurra gahameera” jedhan.
Kanaafis akkaataa murtee haaraa darbeen “imalaan kamiyyuu uffatas ta’e meeshaa daldalaaf oolu kamiyyuu qabatee yoo dhufe qaraxa kaffaluunsaa akkuma eegametti ta’ee seera qorannoo yakkaatiin hana gaafatamuutti gahuu danda’a” jechuun himan.
Haa ta’u malee imaltootni yeroo ji’a tokkoo oliif biyya alaa turanfi yeroo duraaf gara biyyaa deebi’an, tuuristootnifi diploomaatootni Paaspoortiifii seenaan imala isaanii ilaalamee meeshaa daldalaaf hin oole fidanii kan dhufan yoo ta’e yeroodhaaf akkaataa qajeelfama lakk. 51/2010 kan keesumeeffaman ta’uu Obbo Mitikkuu Ababaaw nutti himaniiru.
“Kuni akkuma jirutti ta’ee imaltootni kamiyyuu omishaalee bifa qaraxarraa bilisa ta’een akka seenan heeyyamameef (uffatafi kophee dabalatee) qaraxa kaffaluun akkuma eegametti ta’ee daldalaaf oola jedhamee yoo yaadame yeroo duraaf adabbii (qaraxafi gibira dachaa) kaffalu. Yeroo lammataaf fidanii yoo dhufan garuu hanga yakkaan gaafatamutti gahuu danda’a” jedhan.
Gama biraatiin imaltootni jiruu isaanii biyya alaa xummuranii biyya keessa jiraachuuf gara biyyaa deebi’an immoo meeshaalee heeyyamamanfi itti fayyadamaa turan ofiif qabataniis ta’e kaargoodhaan erganii yoo fidatan akkataa qajeelfama lakk. 51/2010tin akka keesumeeffaman Obbo Mitikkuun himaniiru.
Haa ta’u malee imaltootni kun meeshaalee qaraxarraa bilisa akka seenan heeyyamameef ta’anillee meeshaalee haaraa gara biyyaa fidanii kan dhufan yoo ta’e qaraxafi gibira itti kaffaluu akka qaban murtee dhiyeenya murtaa’een himameera.